“Fanomezana Tonga Lafatra” avy any Amin’ny Ray ny Vidim-panavotana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mongol Mooré Motu Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Romanianina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
‘Avy any amin’ny Ray ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra.’—JAK. 1:17.
HIRA: 148, 109
Inona no ifandraisan’ny vidim-panavotana amin’ny fanamasinana ny anaran’Andriamanitra?
Inona no ifandraisan’ny vidim-panavotana amin’ny Fanjakan’Andriamanitra?
Nahoana no ilaina ny vidim-panavotana mba hanatanterahana ny fikasan’Andriamanitra?
1. Inona avy ny fitahiana ho azontsika, noho ny vidim-panavotana?
MARO ny soa azontsika noho i Jesosy Kristy nanao sorona ny ainy. Afaka manantena ny hiaina mandrakizay sy ho sambatra, ohatra, isika. Ho lasa anisan’ny fianakavian’Andriamanitra koa izay taranak’i Adama tia ny fahamarinana. Misy zava-dehibe maromaro ho tanteraka koa anefa noho i Jesosy nanome ny ainy, ary mahakasika an’izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany izany.—Heb. 1:8, 9.
2. a) Inona avy ireo zava-dehibe noresahin’i Jesosy tao amin’ilay vavaka nampianariny? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.) b) Inona no hodinihintsika ato?
2 Nampianatra ny mpianany hivavaka toy izao i Jesosy, roa taona teo ho eo talohan’ny nahafatesany: “Rainay izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao! Ho tonga anie ny fanjakanao! Hatao etỳ an-tany anie ny sitraponao, tahaka ny any an-danitra!” (Mat. 6:9, 10) Hojerentsika hoe nahoana no ilaina ny vidim-panavotana mba hanamasinana ny anaran’Andriamanitra sy hahazoana ny fitahiana hoentin’ilay Fanjakany ary hanatanterahana ny fikasany. Hanampy antsika hankasitraka kokoa ny vidim-panavotana izany.
3. Inona no asehon’ilay anarana hoe Jehovah, ary inona no lainga nolazain’i Satana momba azy?
3 Ny fanamasinana ny anaran’Andriamanitra hoe Jehovah no noresahin’i Jesosy voalohany tao amin’ilay vavaka modely. Asehon’io anarana io fa faran’izay mahery sy tsara toetra i Jehovah ary masina. Niantso azy hoe “Ray Masina” i Jesosy, tao amin’ny vavaka iray hafa. (Jaona 17:11) Masina daholo ny toro lalana sy lalàna avy amin’i Jehovah satria masina izy. Nataon’i Satana anefa, tany Edena, izay hahatonga ny olona hisalasala raha tena manana zo hanao fitsipika ho azy ireo i Jehovah. Nandainga izy tamin’izay, ka nanoso-potaka ny anaran’Andriamanitra.—Gen. 3:1-5.
4. Inona no nataon’i Jesosy mba hanamasinana ny anaran’Andriamanitra?
4 I Jesosy kosa anefa tena tia ny anaran’i Jehovah. (Jaona 17:25, 26) Nanao izay rehetra azony natao izy mba hanamasinana azy io. (Vakio ny Salamo 40:8-10.) Nankatò an’i Jehovah foana izy tamin’izy tetỳ an-tany. Nasehony tamin’izany fa ara-dalàna raha manome fitsipika i Jehovah, ary mahasoa foana ny fitsipika omeny. Tsy nivadika tamin’ny Rainy mihitsy i Jesosy, na dia nataon’i Satana aza izay hahatonga azy hijalijaly sy ho faty. Noporofoiny tamin’izany fa vitan’ny olona lavorary ny mankatò foana an’Andriamanitra.
5. Inona no azontsika atao mba hanamasinana ny anaran’Andriamanitra?
5 Ary isika? Ahoana no ampisehoantsika fa tiantsika ny anaran’i Jehovah? Amin’ny fomba fiainantsika. Milaza izy fa tokony ho masina isika. (Vakio ny 1 Petera 1:15, 16.) Midika izany hoe izy irery no tokony hotompointsika, ary tokony hankatò azy amin’ny fo manontolo isika. Miezaka mafy mankatò ny toro lalany sy ny lalàny isika, na dia rehefa enjehina aza. Rehefa manao ny tsara isika, dia mampamirapiratra ny fahazavantsika, ka manome voninahitra ny anaran’i Jehovah. (Mat. 5:14-16) Porofointsika amin’izany hoe mahasoa ny lalàn’i Jehovah ary mpandainga i Satana. Mety hanao fahadisoana daholo anefa isika. Hibebaka isika rehefa mitranga izany, ary hiezaka mafy mba hiala amin’ireo fanao manala baraka an’i Jehovah.—Sal. 79:9.
6. Nahoana i Jehovah no afaka manambara antsika ho marina, na dia tsy lavorary aza isika?
6 Afaka mamela ny fahotantsika i Jehovah, noho ny sorona nataon’i Kristy. Mila maneho finoana an’io sorona io anefa isika. Eken’i Jehovah ho mpanompony ny olona nanokan-tena ho azy. Ambarany ho marina ny Kristianina voahosotra, ka lasa zanany. Ambarany ho marina koa ny “ondry hafa”, ka lasa namany. (Jaona 10:16; Rom. 5:1, 2; Jak. 2:21-25) Noho ny vidim-panavotana àry, dia afaka mifandray tsara amin’ilay Raintsika any an-danitra isika sady afaka manamasina ny anarany.
7. Inona no fitahiana ho azontsika, noho ny vidim-panavotana?
7 Izao no nolazain’i Jesosy avy eo tao amin’ilay vavaka modely: “Ho tonga anie ny fanjakanao!” Inona no ifandraisan’ny vidim-panavotana amin’ny Fanjakan’Andriamanitra? I Jesosy sy olona 144 000 no ho mpanjaka ao amin’io Fanjakana io. Ny vidim-panavotana no mahatonga an’ireo olona ireo ho afaka ho any an-danitra, ka ho lasa mpisorona sy mpanjaka miaraka amin’i Jesosy mandritra ny arivo taona. (Apok. 5:9, 10; 14:1) Hanova ny tany ho paradisa io Fanjakana io, ary hanampy ny olona tsy mivadika rehetra mba ho lasa lavorary. Ho lasa fianakaviana iray ny mpanompon’i Jehovah rehetra eto an-tany sy any an-danitra amin’izay. (Apok. 5:13; 20:6) Hanorotoro ny lohan’ilay menarana i Jesosy, izany hoe handringana an’i Satana. Hataony tsy misy intsony koa ny olana rehetra vokatry ny fikomian’i Satana.—Gen. 3:15.
8. a) Inona no nataon’i Jesosy mba ho azon’ny mpianany fa tena ilaina ny Fanjakan’Andriamanitra? b) Ahoana no ampisehoantsika fa manohana an’io Fanjakana io isika?
8 Nampian’i Jesosy ny mpianany mba hahatakatra fa tena ilaina ny Fanjakan’Andriamanitra. Vao vita batisa, ohatra, izy dia nitory “ny vaovao tsaran’ny fanjakan’Andriamanitra” tany amin’izay rehetra nalehany. (Lioka 4:43) Talohan’ny niverenany tany an-danitra koa i Jesosy, dia nandidy azy ireo mba ho vavolombelony “any amin’ny faritra lavitra indrindra amin’ny tany.” (Asa. 1:6-8) Lasa mahafantatra momba ny vidim-panavotana ny olona, noho ny fitoriana momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Lasa afaka mifidy ny ho vahoakan’izy io koa izy ireo. Manohana an’io Fanjakana io isika, ka manampy ny rahalahin’i Kristy eto an-tany mba hitory ny vaovao tsara momba azy io maneran-tany.—Mat. 24:14; 25:40.
‘HATAO ANIE NY SITRAPONAO!’
9. Nahoana isika no matoky fa hotanterahin’i Jehovah izay tiany hatao ho an’ny olombelona?
9 Nilaza i Jesosy avy eo hoe: ‘Hatao anie ny sitraponao!’ Inona no tiany holazaina? I Jehovah no Mpamorona, ary rehefa misy zavatra ampanantenainy, dia tanteraka foana izany. (Isaia 55:11) Tsy maintsy hotanterahiny ny fikasany, na dia nikomy aza i Satana. Efa hatramin’ny voalohany no tian’i Jehovah hiteraka maro i Adama sy Eva, ka ho feno olona lavorary ny tany. (Gen. 1:28) Tsy ho tanteraka izany raha tsy niteraka i Adama sy Eva talohan’ny nahafatesany. Navelan’i Jehovah hanan-janaka àry izy ireo, na dia efa nanota aza. Noho ny vidim-panavotana, dia afaka ny ho lavorary sy hiaina mandrakizay izay rehetra maneho finoana. Tian’i Jehovah isika olombelona, ary tiany ho tsara be araka ny nikasany azy ny fiainantsika.
10. Nahoana ny vidim-panavotana no mahasoa an’ireo olona efa maty?
10 Ary ahoana ny amin’ireo olona an’arivony tapitrisa efa maty nefa tsy nahalala an’i Jehovah sy tsy nanompo azy? Tian’i Jehovah ho velona isika, fa tsy ho faty. Hovelominy indray àry ireny olona efa maty ireny. Afaka manao an’izany izy, noho ny vidim-panavotana. Ho afaka hianatra momba an’i Jehovah sy hiaina mandrakizay ireny olona ireny. (Asa. 24:15) Ho lasa Rain’izay rehetra hatsangana amin’ny maty i Jehovah, ilay Loharanon’aina. (Sal. 36:9) Tena mety àry ny nampianaran’i Jesosy antsika hivavaka hoe: “Rainay izay any an-danitra.” (Mat. 6:9) Hasain’i Jehovah hanangana ny maty i Jesosy, rehefa ao amin’ny Paradisa. (Jaona 6:40, 44) Ho tanteraka amin’izay ilay teniny hoe: “Izaho no fananganana ny maty sy fiainana.”—Jaona 11:25.
11. Inona no nampanantenain’i Jehovah?
11 Ny olona rehetra no tian’i Jehovah ho lasa anisan’ny fianakaviany. Hoy mantsy i Jesosy: “Na iza na iza manao ny sitrapon’Andriamanitra, dia izy no rahalahiko sy anabaviko ary reniko.” (Mar. 3:35) Nilaza i Jehovah fa hisy “vahoaka be” avy amin’ny firenena sy foko ary fiteny rehetra ho lasa mpanompony. Ho voavonjy izay mino ny vidim-panavotana sy manao ny sitrapon’i Jehovah. Ho afaka hiteny izy ireo hoe: “Ny famonjena dia azontsika avy amin’Andriamanitsika, izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy avy amin’ny Zanak’ondry.”—Apok. 7:9, 10.
12. Inona no ianarantsika avy amin’ilay vavaka nampianarin’i Jesosy?
12 Nisy zavatra maromaro momba ny fikasan’i Jehovah, nianarantsika tao amin’ilay vavaka nampianarin’i Jesosy. Lasa fantatsika, ohatra, fa tiany hiezaka mafy hanamasina ny anarany isika. (Isaia 8:13) Manome voninahitra ny anaran’i Jehovah ny sorona nataon’i Jesosy. Izy io no mahatonga antsika ho afaka hanantena ny ho voavonjy, ary ny hoe Jesosy dia midika hoe “I Jehovah dia Famonjena.” Lasa fantatsika koa fa hampiasa ny Fanjakany i Jehovah, mba hanampiana ny olona handray soa avy amin’ny vidim-panavotana. Ary farany, rehefa mandinika an’ilay vavaka isika, dia mahazo toky fa tsy misy mahasakana an’i Jehovah tsy hanatanteraka ny sitrapony.—Sal. 135:6; Isaia 46:9, 10.
ASEHOY FA MANKASITRAKA NY VIDIM-PANAVOTANA IANAO
13. Nahoana isika no atao batisa?
13 Azo inoana fa mankasitraka ny vidim-panavotana ianao. Anisan’ny fomba tsara indrindra ampisehoana an’izany ny hoe manokan-tena ho an’i Jehovah sy atao batisa. Rehefa atao batisa isika, dia mampiseho amin’ny rehetra hoe “an’i Jehovah” isika. (Rom. 14:8) Toy ny hoe mangataka amin’i Jehovah koa isika mba hanana feon’ny fieritreretana madio. (1 Pet. 3:21) Manaiky an’izany fangatahana izany i Jehovah, ka ekeny ho namany isika noho ny sorona nataon’i Kristy. Matoky tanteraka àry isika hoe homeny antsika izay rehetra nampanantenainy.—Rom. 8:32.
Ahoana no azontsika ampisehoana fa mankasitraka ny vidim-panavotana isika? (Fehintsoratra 13, 14)
14. Nahoana isika no tokony ho tia ny mpiara-belona amintsika?
14 Inona koa no azontsika atao raha mankasitraka ny vidim-panavotana isika? Tokony ho be fitiavana isika. Vokatry ny fitiavana mantsy ny zava-drehetra ataon’i Jehovah, ka tiany hanao hoatr’izany ny mpanompony rehetra. (1 Jaona 4:8-11) Tokony ho tia ny mpiara-belona amintsika koa isika. Te ho zanak’ilay Raintsika any an-danitra mantsy isika. (Mat. 5:43-48) Izany rahateo no didy faharoa manarakaraka an’ilay hoe: “Tiavo i Jehovah.” (Mat. 22:37-40) Tia ny mpiara-belona amintsika isika raha mitory aminy ny vaovao tsara momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Manome voninahitra an’i Jehovah isika rehefa maneho fitiavana, indrindra fa amin’ny mpiray finoana amintsika. Ho lasa “lavorary ao amintsika” ny fitiavana an’i Jehovah amin’izay.—1 Jaona 4:12, 20.
“MAMELOMBELONA” ANTSIKA NY VIDIM-PANAVOTANA
15. a) Inona no fitahiana efa omen’i Jehovah antsika? b) Inona no fitahiana ho azontsika amin’ny hoavy?
15 Ho voavela tanteraka ny helotsika, raha mino ny vidim-panavotana isika. Manome toky antsika ny Tenin’Andriamanitra fa azo vonoina tsy hisy intsony ny fahotantsika. (Vakio ny Asan’ny Apostoly 3:19-21.) Efa hitantsika tany aloha hoe noho ny vidim-panavotana, dia atsangan’i Jehovah ho zanany ny Kristianina voahosotra. (Rom. 8:15-17) Ary ny “ondry hafa”? Toy ny hoe efa nanamboatra taratasy hananganana azy ireo ho zanany i Jehovah, ary efa misoratra ao ny anaran’izy ireo. Rehefa lasa lavorary anefa izy ireo, ary tafavoaka soa aman-tsara amin’ny fitsapana farany, izay vao tena hatsangan’i Jehovah ho zanany. Toy ny hoe manao sonia an’ilay taratasy izy amin’izay. (Rom. 8:20, 21; Apok. 20:7-9) Ho tian’i Jehovah mandrakizay ny zanany, ary haharitra mandrakizay ny soa entin’ny vidim-panavotana. (Heb. 9:12) Fanomezana sarobidy ny vidim-panavotana, ary tsy misy afaka maka azy io amintsika.
16. Nahoana ny vidim-panavotana no manafaka antsika?
16 Tsy ho vitan’ny Devoly ny hisakana antsika tsy ho lasa anisan’ny fianakavian’i Jehovah, raha tena mibebaka isika. Maty “indray mandeha monja” i Jesosy, ka voaloa indray mandeha tsy miverina koa ny vidim-panavotana. (Heb. 9:24-26) Voaheloka ho faty isika rehetra noho ny nataon’i Adama, nefa afaka madiodio noho ny soron’i Jesosy. Tsy andevozin’ny tontolon’i Satana intsony isika, ary tsy matahotra ny ho faty.—Heb. 2:14, 15.
17. Inona no tsapanao rehefa mieritreritra hoe tena tia anao i Jehovah?
17 Tsy maintsy ho tanteraka ny fampanantenan’i Jehovah. Tsy miova mihitsy izy, hoatran’ny lalàna nataony mba hifehezana ny zavatra noforoniny. (Mal. 3:6) Tsy hoe omeny fiainana fotsiny isika. Tena tia antsika koa izy. “Ny tenantsika mihitsy no efa mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika.” Fantatsika hoe “Andriamanitra dia fitiavana.” (1 Jaona 4:16) Ho lasa paradisa mahafinaritra be ny tany tsy ho ela, ary hanam-pitiavana toa an’i Jehovah ny olon-drehetra. Hiara-hanandra-peo amin’ireo anjely tsy mivadika isika amin’izay, ka hanao hoe: “Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay anie ny dera sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny tanjaka! Amena.”—Apok. 7:12.